Waa tee Kooxda doonaysa inay la wareegto haatan laacibka Manchester City ee Fernandinho? – Gool FM
(Manchester) 20 Dis 2021. Kooxda kubadda cagta ee Atletico Mineiro ayaa doonaysa in laacibka Manchester City ee Fernandinho uu dib ugu soo laabto dalkiisa hooyo.
Warsidaha Sport Witness ayaa warinaya in Kooxda Atletico Mineiro ay ka shaqeynayso qaabkii ay ku heli lahayd ciyaaryahanka khadka dhexe ee Manchester City, Fernandinho, isla markaana uu dib ugu soo laaban lahaa dalkiisa Brazil.
Kooxda reer Brazil ayaa dhawaan wax ka weydisay suurtagalnimada heshiis ay bisha Janaayo kula wareegto 36-sano jirkaan, laakiin Man City uma ogolaan doonto inuu baxo xiddigan ka hor dhammaadka xilli ciyaareedka.
Fernandinho ayaa qandaraaskiisa haatan waxa uu ku eg yahay bisha June ee sanadka 2022-ka, taasoo la micno ah in Mineiro ay dib u cusbooneysiin karaan xiisahooda marka uu noqdo beeca xorta ah.